Ubuhle besifazane bubizwa kusukela esikhathini esidlule. Ukhuthaza abantu ukuba baxhase, abaculi - bezobuciko, nezimbongi - kumigqa ephefumulelwe. Ubuhle beqiniso bujabule, imizwa emihle, izipikili ezinempilo, izinwele namazinyo. Ayikho ukuhlinzwa kwepulasitiki noma into ephathekayo ezobuyisela amandla ezipikili nokukhanya okunethezeka ezinwele. Ubuhle obunjalo buvela kuphela ngaphakathi. Ukusebenzisa izithako ezikhethekile, ungazuza okuningi kunokuba uzokuvakashela ku-cosmetologist.
Ubuhle Bombono - ubuhle obuvela kuNkulunkulu
Izinwele eziphukile nezipikili akuzona inkinga "yendawo" nhlobo. Lokhu kuyinkomba yesimo sezempilo. Akukhona ngezifo ezithile, kodwa ukuthi umzimba wakho usebenza kanjani ngokugcwele. Isimo sakhe sithinteka ngama-radicals amahhala, okubangela izinqubo ze-oxidative eziqinile. Kubonakala ngathi ukwehla kancane kancane komsebenzi, ukulahlekelwa amandla okuqina kuyinto evamile ehlobene nobudala. Kodwa lokhu akunjalo! Isizathu sokuguga ngumsebenzi wama-radicals wamahhala, inani lawo elikhula njalo ngenxa yemikhuba yokungadli kahle, imikhuba emibi, ukungcola kwemvelo. Ngabo ungakwazi futhi kufanele ulwe. Lokhu kusizwa yi-antioxidants yemvelo.
I-Formula BAD "Ubuhle" yenzelwe abesifazane ngqo. Lesi sithako sihlanganisa izithako zemvelo, ezomvelo ezisekelwe ku-borage, i-wheat, i-bex, i-soy, amagilebhisi. Umuthi uqukethe i-vitamin E, i-biotin kanye ne-cod yamafutha. Lena iresiphi yobuhle bemvelo nobusha. "Ubuhle" buvikela umzimba emthonjeni wama-radicals wamahhala, onondla, abuyisele imisebenzi yomzimba, uphakamisa. Ngokusetshenziswa njalo, owesifazane uphawula ngokushesha ukuthuthukiswa kwenhlalakahle jikelele. Umphumela wokuvuselelwa ubonakala:
amandla, vivacity, ukubuya komsebenzi;
isikhumba siba bushelelezi futhi siphelele;
izinwele zithola amandla futhi zikhanye;
Izipikili ziyeke ukuhlukanisa nokuphuka.
Ama-antioxidants namavithamini abangela isifo esinamandla ebuchosheni kanye nobuthakathaka, umzimba uhlanzwa izinto ezinobungozi eziqoqiwe. Kubonakala kowesifazane ukuthi uzalwa kabusha. Ngomqondo othile, kungukuthi: isithasiselo sinomthelela omuhle ezindongeni ze-adrenal futhi sivame ukwenza umsebenzi wezinhlayiya zobulili. Kanye nokukhangisa kwangaphandle kukhona uhlobo "lwamagnetism yangaphakathi" - ubulili.
I-Millenium Neo Gel - ikhambi eliyingqayizivele lokulwa nokuguga
Lo mkhiqizo oyimangalisa wabesifazane abaningi ube yinsindiso kusukela ekugugeni. I-formula isekelwe i-aloe, i-ginseng, i-camellia Chinese, i-horsetail, i-Asian Centella, ukolweni, i-ginkgo biloba, amavithamini ne-sodium hyaluronate. Ijel ingena ngokujulile esikhumbeni bese ibuyiselwa ezingeni leselula. Ezinsukwini ezimbalwa uzobona imiphumela:
ukuphefumula kancane kancane kwemibimbi;
ukuqina, ubushelelezi, ukukhanya kwangaphakathi kwesikhumba;
ubukhali bezinhlangothi zobuso.
I-Gel "Millennium Neo" ingasetshenziswa njengekhambi lokuzimela elizimele, kodwa umphumela uyoba umxhwele kakhulu uma uwuthatha ngokuhambisana ne-beauty "Supply".
Indlela yokuzijabulisa kubantu
Izindebe ezicwebezelayo - isifiso sokwenza imisindo kusuka kuPat McGrath
Yenza kanye nekhanda lomfazi webhizinisi
3 izinwele zezinwele ezenziwe lula ngokwakho!
Isizathu sokubukeka kwe-acne ekukhuleni kwabesifazane
Yikuphi ukuvivinya umzimba okumelwe kwenziwe ukuze ulawule ubuhlungu bokubuyela emuva
I-BBQ steak nge-arugula
Ukuphulwa kwe-anus, izikhambi zabantu
Ngidinga ukuziqhathanisa nami kanye nabanye?
I-oda endlini lapho ungaqala khona
Ama-Meatballs anezinongo ze-turkey ne-oregano nesinamoni
Isimo ngoFebhuwari 23, 2017 kubafundi bezikole nabasesikoleni esiphakeme esikoleni. Isimo sebhizinisi esilungile seSewender of the Fatherland Day ngoFebhuwari 23, osebenza nabo besilisa emsebenzini kanye neNdlu yaseMadolobheni yamaSiko
Ikhambi eliphikisana namagciwane ekhaya
Ukuphakama Kwenu: umbusi we-jeweler sikaRoberto Coin Princess
Ingaphakathi lokungena endlini yokulala endlini emhlophe nombala okwesibhakabhaka
Kuthiwani uma kungekho ubulili ebuhlotsheni?
Amazambane aphethwe ngamakhambi kanye negalikhi
I-Chocolate Brownie Cake - iresiphi ejwayelekile